TTSweet: မုန့်ဖက်ထုပ် ပူပူနွေးနွေး စားရအောင် ...
Posted by T T Sweet at 6:37 PM
AMK March 25, 2011 at 7:38 PM
P March 25, 2011 at 8:41 PM
Thanks so much, sis. I have always loved to see all your cooking post. I'll try making it :)
Vista March 25, 2011 at 8:48 PM
ကောင်းမှကောင်း..... သြော်ဇီ ရောက်ရင်လည်း ချက်စားတာလေးတွေ တင်ဦးနော် တီဆွိ
ဆုမြတ်မိုး March 25, 2011 at 9:52 PM
ဖိုးတုတ် March 25, 2011 at 11:25 PM
မုန့် ဖက်ထုတ်လုပ်နည်းက ခက်တယ်ဗျို့၊ သြော်ဇီကို မပြောင်းခင် နုတ်ဆက်ပွဲအနေနဲ. မုန့် ဖက်ထုတ် ၊ ၀က်သားထုတ်ထိုးလုပ်ပြီးကျွေး ၊ ဒါဗြဲ ....
တန်ခူး March 26, 2011 at 12:30 AM
သူငယ်ချင်းလုပ်ပြလိုက်တော့ ခုချက်ချင်းကို မုန့် ဖက်ထုတ် ထလုပ်စားချင်သွားတယ်... အပင်လေးရှိသေးတယ်နော်... ဒီအပတ်လာဖြစ်မလားမသိဘူး
Shinlay March 26, 2011 at 12:47 AM
အဖြူရောင်နတ်သမီး March 26, 2011 at 1:36 AM
ကျောက်ဖက်ထုပ် March 26, 2011 at 2:24 AM
ညည မုန့်ဖက်ထုပ်လို့ လာအော်မလား နားစွင့်နေတာ..
ပြီးတော့ မှ သူကမုန့်လုပ်နည်းပဲ ရေးထားသကိုး
mks March 26, 2011 at 2:31 AM
ဂလု မုန့်ဖက်ထုတ် ကို အဆန်းဆုံးကြားဘူးတဲ့နာမည် က အညာသား ကျောကုန်း တဲ့ တောင်ငူ က အကိုတွေ ဆီသွားလို့ကြားဘူးတာပါ။
ခနွဲ March 26, 2011 at 3:39 AM
ထုံးစံအတိုင်း သားရေယိုပြီး ပြန်သွားရကြောင်းပါ။
ဝက်ဝံလေး March 26, 2011 at 3:58 AM
မစားရဝခမန်း ဟွင့် တီတီဆွီ များကို နှိပ်စက်တယ်
ဗိုက်ဆာပါတယ် ဆိုကာမှ ဗြဲ ....
ငွေစန္ဒာ March 26, 2011 at 10:57 AM
တီဆွီရေ မုန့်ဖက်ထုတ် စားချင်သွားပါတယ်..
သက်ဝေ March 26, 2011 at 12:08 PM
အချစ်အကြောင်းပြောပါဆိုတာကို မုန့်ဖက်ထုပ် တဲ့... လူဆိုး...
(စားချင်စိတ်ကို လမ်းလွှဲပြီး စိတ်ဆိုးချင်ယောင်ဆောင်သွားသည်...)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 26, 2011 at 8:37 PM
ကိုယ့်ဟာကို ရောင်းပြီး ကိုယ့်ဟာကို ၀ယ်စားလိုက်တော့မယ်..
နည်းရသွားပြီ။ ဒီမှာ မုန့်ဖက်ထုပ် လုပ်ရောင်းရမယ်
pandora March 27, 2011 at 1:39 PM
၀ိုး..... မုန့်ဖက်ထုပ်လေးတွေက စားချင်စရာ...။ နည်းလမ်းလေး ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ။ ပြောပြတော့လည်း လွယ်သလိုပါပဲလား။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ငယ်ငယ်က နေခဲ့တုန်းက အဲဒီဘက်မှာ အိမ်တိုင်းမှာ မုန့်ဖက်ထုပ် လုပ်စားကြတဲ့ အချိန်တစ်ခုရှိတယ်။ တန်ဆောင်မုန်းလောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆိုရင် လူတိုင်း အိမ်တိုင်းကို မုန့်ဖက်ထုပ်တွေ အချင်းချင်း လိုက်ဝေကြတယ်။ ဘယ်သူ့မုန့်က ဘယ်လိုအရသာလို့ မတူတာလေးတွေရှိရင်လည်း နှိုင်းယှဉ်စားကြတာကို သတိရမိတယ်။ တချို့က သာကူစေ့လေးတွေပါ ထည့်တယ်။
သကြားမုန့်ဖက်ထုပ်ပူပူနွေးနွေး လို့ ညဘက်တွေမှာ အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ရောင်းတဲ့ အသည်လေးတွေကိုလည်း သတိရမိတယ်။
Sonata Cantata March 27, 2011 at 6:56 PM
ချောရေးသွားတာ ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတယ်..
လုပ်စားမယ် သားတို့လည်း ကြိုက်တယ်
မယ့်ကိုး March 29, 2011 at 11:53 PM
မုန့်ဖက်ထုပ် ပူပူနွေးနွေး.... ;'(
ကိုးငယ် September 12, 2011 at 5:39 PM
အစ်မ ရေ .. ညီမ သိချင်တာလေး မေးချင်လို့ပါ .. Rice cooker နဲ့ ပေါင်းတဲ့ အခါ ဘယ် နှမိနစ် လောက် ပေါင်းရလဲ ဆိုတာလေး သိလို့ရမလား ရှင့် ....
T T Sweet September 12, 2011 at 7:57 PM
ညီမရေ အဖုံးလုံရင် နာရီဝက်လို့ရေးထားတာ ထမင်းပေါင်းအိုး (Rice cooker) ကို ပြောတာပါ။
my logic September 17, 2011 at 3:53 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်. :)
Pls see this link. I think she copied ur photo and posted on အိမ်ရှင်မလက်ရာ.